Matongerwo eNyika, 01 Chikumi 2018
Chishanu 1 Chikumi 2018
Chikumi 01, 2018
Maporofita eKereke yeZion Anorwisa Nyoka Mudhamu reGaranyemba kuGwanda
Maporofita ekereke yeZion aita chishamiso chasiya vanhu vakawanda vakashama mirimo yavo apo apinda mudhamu reGaranyemba ndokurwisana nenyoka huru iyo inonzi yanga ichikonzera kufa kwevanhu pamwe nezvipfuyo kuGwanda mudunhu reMatabeleland South.
VaKasukuwere Vanobvisiswa Mari yeChibatiso Kuitira Kuti Vatongwe Vachibva Kumba
Vaimbova gurukota rezvematunhu, VaSaviour Kasukuwere, vamiswa pamberi pedare ramejasitiri muHarare uko kwavapihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso madhora mazana matatu pamhosva yavari kupomerwa yekubuda munyika zvisiri pamutemo.
ZEC Yopa Vanoda Kukwikwidza Mapepa eKunyoresa
Apo mutungamiriri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vakatara zuva richaitwa sarudzo, vakatarawo kuti dare rekutambira magwaro evanoda kukwikwidza musarudzo idzi richagara musi wa14 mwedzi uno munzvimbo dzakasiyana siyana nyika yese.
Muzvare Khupe Voendesa MDC yaVaChamisa kuMatare
MDC- T inotungamirirwa naMuzvare Thokozani Khupe inoti iri kuenda kumatare edzimhosva nechinangwa chekuda kumisa MDC-T inotungamirwa na VaNelson Chamisa kuti isashandise mari yakabva kuhurumende pasi pemutemo we Political Parties Finance Act.
MDC Alliance Yoshushikana neMaitiro aVaMnangagwa
MDC Alliance inoti haisi kufara kuti mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakatara zuva resarudzo pasina kugadziriswa zvose zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dziri pachena.
VaMnangagwa Vanoti Zanu PF Ichatonga Kusvika Madhongi Amera Nyanga
Mutungamiri weZanu PF uye vari mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanoti hapana zvichashanduka pahutungamiri huripo mushure mesarudzo sezvo bato ravo richatonga nekusingapere.
Ishe Bushu veZanu PF Vokwirirwa Matare Kuti Vasakwikwidze Musarudzo
Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu, reZimbabwe Lawyers for Human Rights rasvitsa kudare reHigh Court magwaro ekupikisa kudomwa kwaVaBramwell Bushu kuti vamirire bato reZanu PF mudunhu reShamva South musarudzo dzenyika dziri kuitwa musi wa30 Chikunguru gore rino.
Vanochera Mangoda Voita Hurukuro neVagari kwaMutare
Mutauriri weZimbabwe Consolidated Diamond Company, VaSugar Chagonda, vanoti hurumende nhasi ichaita musangano mukuru muguta reMutare apo ichagara pasi nemasangano akazvimiririra, vanorwira kodzero dzevanhu, makambani anochera mangoda vakaita seZimbabwe Consolidated Diamond Company.
Chivabvu 31, 2018
Zanu PF Inodzinga Nhengo Dzayo Nhatu muNational Assembly
Zanu PF yamisa nhengo dzayo nhatu kuti dzisamiririe bato iri muparamende ichiti nhengo idzi hadzisi kutevedzera mitemo yebato iri.
Vagari Voratidzira kwaMutare Zvichitevera Kudzimirwa Magetsi neMvura
Vagari vemumusha weSakubva kwaMutare nhasi varatidzira pamuzinda wekanzuru yeguta iri vachiti vanoda kuvhurirwa mvura nemagetsi izvo zvakavharwa nekanzuru yavo.
Vakawanda Vanoti VaMnangagwa Vakaita Zviri paMutemo Mukutara Zuva reSarudzo
Kutarwa kwezuva resarudzo kunogaronetsa veruzhinji kuti kunofambiswa sei kana sarudzo dzave pedyo.
VaMnangagwa Vanoti Bato Ravo Ndiro Richakunda Pachaitwa Sarudzo
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakurudzira vechidiki kuti vavhotere Zanu PF vachiti ndiyo chete nzira yekuchengetedza nhaka yenyika.
MaKristu Ocherechedza Zororo reEaster Kunyange Zvinhu Zvakaoma muNyika
UN Yotyira Kutyorwa kweKodzero dzeMadzimai neVasikana keChimanimani neChipinge
Zvizvarwa zveZimbabwe Zvinoungana muMaryland
VaChamisa Vanoti VaMnangagwa Ngavakumbire Ruregerero paNyaya yeGukurahundi